Ọkwa 35 SmCo Igwe Ọdụdọ na ndị nrụpụta | Horizon
Ọkwa 35 SmCo magnet ma ọ bụ magnet 35 Samarium Cobalt magnet bụ ugbu a ihe kachasị ike Samarium Cobalt magnet na ahịa. Ọ bụ ihe pụrụ iche dị elu SmCo na-enye ngwaahịa ike dị elu, nguzogide corrosion, nkwụsi ike okpomọkụ magburu onwe ya na nguzogide demagnetization ọnọdụ.
N'oge gara aga, ọkwa 30 ma ọ bụ 32 bụ ọkwa kachasị elu nke Samarium Cobalt nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-eweta igwe ndọta China SmCo nwere ike ibute. 35 ọkwa Samarium Cobalt bụ nke ụfọdụ ụlọ ọrụ US na-achịkwa, dị ka Arnold (Arnold Magnetic Technologies, ọkwa RECOMA 35E), EEC (Electron Energy Corporation, 34 ọkwa SmCo). Horizon Magnetics bụ otu n'ime ụlọ ọrụ magnet ole na ole nwere ike ịbute magnet 35 SmCo magnets n'ọtụtụ ọnụọgụ nke Br> 11.7 kGs, (BH) max> 33 MGOe na Hcb> 10.8 kOe.
1. Inwekwu ikike mana iwetulata ibu. Maka Samarium Cobalt, ọkwa a na-abawanye ume ike iji daba ụfọdụ ngwa dị egwu ebe obere obere na mmelite arụmọrụ bụ ihe kacha mkpa
2. Nkwụsi ike dị elu. Maka ọkwa a, BHmax, Hc na Br dị elu karịa ọkwa dị elu nke Sm2Co17 dị ka ọkwa 32, na nkwụsi ike okpomọkụ na ọnọdụ kachasị arụ ọrụ na-aka mma.
Elekwasị anya Ngwa
1. Motorsports: Na motorsports, ọ bụ ihe kacha mkpa iji merie mpi asọmpi site na iji uru nke ihe ọhụrụ jirichaa torque na osooso na ndị kasị nta na kasị mụ ngwugwu.
2. Dochie nnukwu arụmọrụ Neodymium magnets: Ọtụtụ oge, ọnụahịa Samarium Cobalt dị oke ọnụ karịa magnet Neummium, ya mere, a na-ejikarị magarium Cobalt magnet maka ahịa ndị ebe magnet Neummium na-erughị eru iji nweta ihe dị mkpa. Nnukwu ụwa Dy (Dysprosium) na Tb (Terbium) nwere obere nchekwa na mba ndị nwere oke mana ọ dị mkpa maka nnukwu ihe magburu onwe ya nke Neodymium gụnyere ọkwa AH, EH ma ọ bụ ọbụlagodi UH, nke ọtụtụ n'ime ha na-eji n'ọtụtụ igwe eletrik. Na 2011 hụrụ oke ịrị elu nke ọnụ ala ụwa. Mgbe ọnụ ala ụwa na-arị elu, 35 ọkwa Samarium Cobalt, ma ọ bụ ọbụlagodi 30 nwere ike ịbụ ihe ndọta magnet kachasị mma maka ndị ọrụ magnet iji nọgide na-akwụ ụgwọ karị ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi ha. N'ihi nkwụsi ike ọnọdụ magburu onwe ya, BHmax maka ọkwa 35 Samarium Cobalt na-aka karịa N42EH ma ọ bụ N38AH nke magnetmium magnet na okpomọkụ karịrị ogo 150C.
N'iji tụnyere SmCo na NdFeB na okpomọkụ
Nke gara aga: SmCo5 Igwe Ọdụdọ
Osote: Igwe Ọdụdọ Magnet
Samarium Igwe Ọdụdọ C ...
Disc SmCo Igwe Ọdụdọ
Rektangulu Samariu ...
SmCo nke Igwe Ọdụdọ
SmCo5 Igwe Ọdụdọ